ट्राफिकको फन्दामा परे पूर्वयुवराज पारस शाह !::kamananews
ट्राफिकको फन्दामा परे पूर्वयुवराज पारस शाह !
ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने पारस ट्राफिकको फन्दामा परेका छन् । पारसले तीव्र गतिमा चलाएको बा.१४ प २१३१ नम्बरको गाडी प्रहरीले समातेको छ ।
जावलाखेलदेखि हुँइकिएका उनलाई जावलाखेल प्रहरीले सोमबार थापाथलीमा नियन्त्रणमा लिएको हो । ट्राफिकले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको र माग्दा नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले लाइसेन्स नदिएपछि पारसले आक्रोसित हुँदै ‘तैंले मलाई चिन्नुपर्छ’ भनेको तर ट्राफिक प्रहरीले नदिएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
ट्राफिक र ब्लुबुक ट्राफिकलाई छाडेर हिँडेको केही समयपछि उनका अंगरक्षक थापाथली ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । पारसले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले पाँच सय जरिवाना गरेको रसित काटेको थियो । रसिदमा चालक र धनीको नाम पारस वि.वि. शाह उल्लेख छ ।
अंगरक्षकले बैंकमा पाँच सय जरिवाना तिरेर पारसको ब्लुबुक तथा लाइसेन्स लगेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर रहेकाे छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खतिवडा पक्राउ, व्यवसायीहरु तितरवितर
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडा पक्राउ परेका छन्। अनुगमनमा गएका सरकारी टोलीलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आज बिहान अनुगमनका लागि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुगेको...